Zinedine Zidane Oo Mucaaradkii Ugu Horreeyey Ku Yeeshay Gudaha Manchester United Sabab? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Published on December 7, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(07-12-2018) Manchester United ayaa ku jirta mid ka mid ah xili ciyaareedadii ugu xumaa muddo ka badan 30 sannadood ee ay garoomada kusoo bandhigto, waxaanay ku jirtaa kaalinta siddeedaad ee liiska kala sarraynta kooxaha iyadoo 18 dhibcood ka hoosaysa kooxda haysa hoggaanka ee Manchester City.
Afartii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee horyaalka Premier League, Manchester United waxay ka heshay saddex dhibcood oo kaliya, waxaanay masiibadu uga soo bilaabantay guul-darro qadhaadh oo Manchester City u xambaarisay, kulankii xigayna waxay barbar-dhac goolal la’aan ah garoonka Old Trafford kula dhamaysteen Crystal Palace ka hor intii aanay Southampton iyo Arsenal sidaas oo kale barbar-dhac ula gelin.
Xogta kulamadan afarta ah ee ay saddexda dhibcood ee kaliya ka heshay oo weliba laba ka mid ah ay garoonkeeda Old Trafford ku ciyaartay, waxay quus ka dhigaysaa rajada laga qabo inay xattaa tartamada Yurub xili ciyaareedka dambe ka muuqan karto.
Dhibaatada Manchester United haysata ayaa inteeda badan loo nisbaynayaa dhinaca tababareyaasha, sababtoo ah, waxay mashaqadan dhex gashay sannadkii 2013 oo uu ah markii uu ka tegay Sir Alex Ferguson, waxaana waqti kooban ku ambobaxay David Moyes iyo Van Gaal oo lagu beddelay, sidoo kale waxa aan cimri badan ku qaadanin Old Trafford halyeygii Ryan Giggs oo si ku-meelgaadh ah xilka u qabtay markii la caydhiyey Van Gaal.
Mourinho oo la wareegay markaas ayaa bilowgii hore u muuqday mid ay wax iskugu hagaageen, waxaanu ku guuleystay koobab aan dhinaca kooxda taariikhda weyn muhiimad weyn ugu fadhiyin, hase yeeshee dhibtiisa ayaa cirka gashay xili ciyaareedkan oo ay guushii ka fogaatay.
Haddii Manchester United ay guul-darraysato ciyaarta ay Sabtida ku martigelinayso Fulham, waxa dhamaad ku dhowaanaya cimriga Jose Mourinho ee Old Trafford oo marka horeba darruuro mugdi ah hadheeyeen.
Haddii albaabka la tuso Jose Mourinho, waxa la hadal hayaa, ahna qofka ugu horreeya ee United lala xidhiidhinayo macallinkii hore ee Real Madrid, Zinedine Zidane oo markii uu saddex Champions League oo isku xiga kula guuleystay mar kaliya ku dhawaaqay inuu ka tegay shaqada Los Blancos dhamaadka xili ciyaareedkii hore.
Taageereyaasha iyo maamulka kooxdu way isku raacsan yihiin inay tijaabiyaan Zidane oo ay ku riyoonayaan inuu ka saari karo dhibaatada haysata, laakiin waxa jira mid ka mid ah halyeeyadii kooxda oo aan la qabin riyadaas, isla markaana shaki geliyey kartida ZIZOU u leeyahay inuu mashaqada ka saaro United.
Paul Scholes oo ka mid ahaa ardaydii uu soo saaray Sir Alex Ferguson, guulo badanna la gaadhay intii uu u ciyaarayay Manchester, ayaa waxa uu su’aal geliyey sida uu Zidane ku noqon karo qofka xalka u keenaya naadigan.
“Zidane ma yahay qofka ku habboon?” Su’aashaas waxa is weydiiyey Scholes oo ka hadlayey telefishanka BT Sports.
“Wuxuu tegay Real Madrid oo ay kusii diyaarsan yihiin ciyaartooyo hore guulo badan usoo gaadhay, laakiin shaqadani gebi ahaanba way ka duwan tahay; waa inuu dib u dhiso kalsoonida koox aan si wanaagsan u ciyaaraynin.
“Real Madrid wuxuu ugu tegay ciyaartooyo badan oo wanaagsan, welina way adag tahay laakiin tan dhamaanteed waa shaqo dibu-dhis ah.”
Waqtigii uu Zidane qabsaday Real Madrid sannadkii 2016 oo badhtamaha maraya, waxa uu la wareegay Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos iyo Luka Modric oo sida fardaha u boodaya, waxaana u suurtogashay inuu saddex jeer oo isku xigta ku guuleysto Champions League.